उत्तम छाला हेरचाह उत्पाद समीक्षा 2019 | सौन्दर्य समीक्षा
उत्तम छाला हेरचाह उत्पादनहरू
हाम्रो समीक्षामा तपाईं छाला हेरचाह उत्पादनहरूमा आउन सक्षम हुनुहुन्छ जुन तपाईंको झुर्रीहरूलाई कम गर्न सक्छ, तपाईंलाई जवान देखिन्छ, र तपाईंको बाँकी जीवनको लागि तपाईंको छालाको बारेमा राम्रो महसुस गर्न बाध्य पार्दछ। यो केवल प्रयोग मार्फत तपाईले छाला हेरचाह उत्पादन फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँलाई तपाइँको मनपर्दो भन्नुहुनेछ! जहाँ एन्टी-एजिंग छाला हेरचाह उत्पादनहरू संलग्न छन्, छालाको सूजन कम गर्न साँझको प्रिमरोसको क्षमता एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
आजकल त्यहाँ धेरै नयाँ छाला हेरचाह उत्पादनहरू छन्। तिनीहरू रासायनिक पदार्थ र सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्, जुन बिक्रीको लागि उपलब्ध भएको देखाइएको छ। संवेदनशील छाला हेरचाहका सामानहरू यी दिनहरू बजारमा प्रस्ताव गरिन्छ, र धेरैजसो संवेदनशील छाला कठिनाइहरूलाई मद्दत गर्नेमा राम्रो छन्। तपाईंले सावधानीपूर्वक आफ्नो छालाको प्रकारको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ बरु पहिले छालको हेरचाह उत्पादन हेर्नु भन्दा तपाईंले देख्नु भएको।
प्रत्येक वस्तु ठ्याक्कै उस्तै हुँदैन। स्किनकेयर उत्पादनहरू छालाको प्रकार र विशेष आवश्यक्ताहरूको अनुरूप चयन हुनुपर्छ। सामान्यतया, hypoallergenic स्किनकेयर उत्पादनहरु लाई एलर्जी प्रतिक्रिया को सम्भावना कम गर्न मानिन्छ।
वर्तमान मा एक राम्रो सम्झौता वास्तव मा आफ्नो समस्या स्थानहरु मा ध्यान केन्द्रित कि धेरै राम्रो स्किनकेयर उत्पादनहरू पत्ता लगाउन उत्तम तरिका मा भ्रमित छन्। त्यहाँ Avarelle, CeraVe, Neutrogena, र Mederma जस्तै ब्राण्डबाट धेरै धेरै स्किनकेयर उत्पादनहरू छन्।
एकदम ढिलो हुनु भन्दा पहिले उत्तम छाला हेरचाह उत्पादनहरूमा स्कूप पाउनुहोस्
यदि तपाईं उत्पादनहरूमा खुसी हुनुहुन्न जुन तपाईं आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सक्षम हुनुहुन्छ। तसर्थ, उत्तम उत्पादनहरूको लागि अप्ट इन गर्न को लागी, तपाईको आवश्यकतालाई पहिचान गर्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ राम्रो प्रकारको निर्णय लिनको लागि बजारमा किनमेलको प्रकारको साथ। पछि अति-काउन्टर उत्पादनहरू छालाका केहि प्रकारहरूमा लक्षित छन्, तपाईंले पहिला तपाईंको छालाको क्रमलाई पहिचान गर्नुपर्दछ।
यस बाहेक, ब्रान्डेड उत्पादनहरू पनि महँगो हुन्छन् जसले निश्चित रूपमा तपाइँको वित्त घटाउन सक्छ। जब तपाई स्वस्थ छालाका लागि अत्यन्त राम्रो छाला हेरचाह उत्पादन प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईको लागि राम्रो काम गर्दछ, तब तपाईको खोजी सकियो र तपाईले सजिलै नयाँ उत्पादनहरूको प्रयास गर्नु हुँदैन यदि तपाई राम्ररी विश्वस्त हुनुहुन्न भने उनीहरूसँग तपाइँको हालको छाला हेरचाह लाइनले केही गरेन भने प्रस्ताव छैन। यदि तपाइँ तपाइँको छालाको टोन राम्रो गर्नेको लागि अत्यन्त उत्तम छाला हेरचाह उत्पादनहरू कसरी छान्ने भनेर फेला पार्नुहुन्न भने सौन्दर्य समीक्षा चयन पढ्न सम्भव छ।
सर्वश्रेष्ठ छाला हेरचाह उत्पादनहरु पछि जीवन
प्रत्येक हप्ता धेरै चोटि, एक उत्पादन प्रयोग गर्न उत्तम छ जुन तपाईंको अनुहारबाट मृत छाला कोषहरूलाई प्रस्फुटित गर्दछ। तपाईको छालालाई कोलाजेन र इलेस्टिनको ठूलो डिग्री प्रदान गर्दछ कि एक नयाँ प्रयोग गर्न को लागी यो महत्वपूर्ण छ कि नयाँ छाला कोशिका पुनः बृद्धि गर्न को लागी, यो आफ्नो छाला आफै नवीकरण गर्न को लागी यो सम्भव बनाउँछ। यसबाहेक, छालाको लागि केहि उत्पादनहरूले खतरनाक रसायनहरू पनि प्रयोग गर्छन् जसले तपाईंको छालालाई हानी पुर्‍याउँछ।
वास्तवमा सब भन्दा राम्रो छाला हेरचाह उत्पादनहरू धेरै सस्तोमा हुन्। तिनीहरू आवश्यक रूपमा उच्च मूल्यको हुदैनन्। तिनीहरू केवल तिनीहरूको सामग्री जस्तै राम्रो हो। सबैभन्दा प्रभावकारी मेडिकल छाला हेरचाह उत्पादनहरू इन्टरनेटमा बिक्रीको लागि प्रस्ताव राखिन्छ ताकि वास्तवमा सबै दिन श्यापिंग मल्लमा आफैंलाई तान्नको लागि केवल कुनै उपयोगी छैन आदर्श एन्टी एजिंग वा मोइस्चराइजिंग क्रीमको खोजीमा।
कुनै छाला हेरचाह उत्पादनले तत्काल परिणामहरू प्रदान गर्न सक्ने छैन, यो मार्केटप्लेसमा पूर्ण उत्तम स्किनकेयर ब्रान्डबाट नै भए पनि। आदर्श छाला हेरचाह उत्पादनहरू फेला पार्नु एक भारी काम हुन सक्छ, तपाईको क्षेत्रीय स्टोरहरूको स्वास्थ्य र सौन्दर्य ऐसको तल मात्र हिंड्नुहोस्। त्यसोभए, बजारमा उपलब्ध अत्यन्त उत्तम छाला हेरचाह उत्पादनहरू पत्ता लगाउने सरल विधि भनेको प्रत्येक ब्राण्डको पछाडि निर्माताहरूमा अलिक अनुसन्धान गर्नु हो।
हानिकारक सामग्रीहरू एकचोटि तपाईंले एक वस्तु फेला पार्नुभयो जुन राम्रो देखिन्छ, र यसको ब्याक अप गर्न यसको एक ठूलो संस्था छ, तपाईंले अवयवहरू विचार गर्नु पर्छ। तपाईंले देख्नु भएको पहिलो संवेदनशील छाला हेरचाह उत्पादन खरीद गर्नु अघि, छाला हेरचाह उत्पादनहरू जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईंले पहिल्यै प्रयोग गरिरहनु भएको छ।
उत्तम छाला हेरचाह उत्पादनहरू: परम सुविधा!
तपाईंको छाला ताजा र चमकदार देखिँदैन। नतिजाको रूपमा, तपाईं आफ्नो छालालाई अझ आकर्षक र ताजा बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईको छाला तपाईको सब भन्दा ठूलो अंग हो र यसलाई लागु हुने कुनै पनि चीज शोषक विशाल स्पन्जको जस्तो छ। यो संवेदनशील छाला को लागी राम्रो छ। यदि यो धेरै उत्तम छाला र अनुहार हेरचाह उत्पादनहरुमा आउँदछ, तपाईलाई जान्नु आवश्यक छ विभिन्न मूल्य दायरा र गुणस्तर छन् जुन कुनै पनि प्रकारको बजेटसँग काम गर्ने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध छन्।
एज़्टेक गोप्य: भारतीय उपचार क्ले
एज़्टेक इन्डियन हिलिंग क्ले यस ग्रहमा सब भन्दा बलियो प्राकृतिक अनुहार सफा गर्नेहरू मध्ये एक हो तर यसले ल्याउने अन्य सुविधाहरूको एक शानदार मात्रा हो।
बेन्टोनाइट माटो समय बित्दै जाँदा उम्रेको खरानीबाट आउँछ। यसमा पोषक तत्त्वहरू छन्। बेन्टोनाइट माटोले पानीको शोषकमा विस्तार गर्ने बित्तिक स्पञ्ज जस्तो संरचनाको क्रमबद्ध गर्दछ। बेन्टोनाइट माटी एक विशेष माटो हो किनकि यसको हाइड्रेटेड हुँदा बिजुली चार्ज गर्न सक्ने क्षमताको कारण। यो एक अद्वितीय माटो हो जुन पानीको सम्पर्कमा आउँदा बिजुली चार्ज सिर्जना गर्ने क्षमता राख्दछ, जुन यसलाई उत्तम प्राकृतिक विष शोषक बनाउँछ। तपाईंले पहिले नै बन्टोनाइट माटोलाई सिकिसक्नुभए पछि केही स्केलप स्थितिको उपचारमा मद्दत गर्न सक्दछ।
क्ले सम्पूर्ण परिवार महिला र पुरुषहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। Aztec माटो छाला को लागी सराहनीय परिणाम सिर्जना गर्न परिचित थियो। केवल तपाईंलाई अझ्टेक गोप्य भारतीय उपचार क्लेको सम्बन्धमा अधिक जान्नको लागि अनुमति दिन चाहन्छ।
सबै माटो एक समान छैन। यो माटो तपाईंको एक्ने समस्याहरू समाधान गर्न द्रुत दृष्टिकोण हो। क्याल्शियम बाहेक माटोलाई म्याग्नेशियम, सोडियम र ट्रेस मात्रामा धेरै खनिजहरूको धेरै मात्रा हुन्छ। यस्तो माटोले तरल वा ग्यास टाढा सँगसँगै अवशोषित गर्न सक्छ। यो माटो विश्वभरि 200 संस्कृतिहरू द्वारा प्रयोग गरिएको थियो।
न्यूट्रोजेना मेकअप रिमूभर वाइप्स
न्यूट्रोजेना मेकअप रिमूभर वाइप्स एकदम सहयोगी उत्पादन हो जुन चम्किरहेको अनुहार सफा पाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सौन्दर्य प्रणालीको अभिन्न अंग हो। यी न्यूट्रोजेना मेकअप रिमूवर वाइपहरू अत्यन्त नरम र मेकअप हटाउनको सट्टामा वास्तवमै प्रभावकारी छन्।
हटाउनेहरूको खोजी गर्ने क्रममा सामग्रीहरू (विशेष गरी औषधि पसलमा) परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सामग्रीको एपिडर्मिसको डिग्रीमा हाइड्रेटिंग प्रभावहरू छन्, तपाईंलाई जिद्दी श्रृंगार हटाउन सक्षम गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो सम्भव भएसम्म धेरै जैविक सामग्रीहरु हुनु पर्छ, ताकि बाहिरी भाग को लागी अधिक क्षति उत्पन्न गर्न को लागी।
सुपर-आर्द्र वाइपले तपाईंको सबै मेकअपलाई हटाउँछ। त्यहाँ बाहिर सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार मध्ये एक हो। त्यहाँ निस्सन्देह उच्च गुणस्तरको सफा गर्ने वाइपहरू छन् जुन उत्तम विकल्पहरू हुन् र तपाई अझै पनि अनुहारको क्लीन्जर प्रयोग गरेर आफ्नो छालालाई सम्भव सरल तरिकामा हेर्न आवश्यक छ। म फेरि यी वाइपहरू खरीद गर्दैछु!
Avarelle एक्ने प्याच
यो एक उत्तम समाधान हो जुन तपाईं यस समयमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। प्याचहरू स्पष्ट छन् र तीन फरक आकारमा आउँछन्। सबैले यस प्याचबाट लाभ लिन सक्छन्, girly प्याकेजि fool मूर्ख तपाईं fellas अनुमति छैन। प्याच मा अर्डर गर्न सकिन्छ अमेजन। अवसरमा, एक्ने प्याचहरू प्राय: सस्तोमा थोकमा फेला पार्न सकिन्छ। खैर, त्यसोभए, तिनीहरू स्मार्ट समाधान हुन सक्छन्। तिनीहरू गोलाकार, अर्ध पारदर्शी स्टिकरको रूपमा आउँछन्।
प्याचहरू धेरै हदसम्म पारदर्शी र बाहिरी भागमा सजिलै ध्यान लाग्ने हुन्छन्। यदि तपाईं औषधी प्याचहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ वा छैन भने, तपाईंले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि तिनीहरूले पिम्पल्सलाई रातभर गायब हुन बाध्य पार्दैन। औषधीयुक्त प्याचको मुख्य फाइदा यसको पातलोपन हो, जसको मतलब यो हो कि यदि तपाईंको पिम्पल समतल छ भने, प्याच तपाईंले देख्नु भए पछि त्यो देखिदैन। केवल दिमागमा राख्नुहोस् कि अनमेडेटेड प्याचमा अलि बढी महँगो हुने झुकाव हुन्छ।
जब एक्ने प्याचहरू प्राप्त गर्न, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि खरीद गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईं सजिलै औषधीको साथ अनमेडेटेड प्याचहरू भ्रमित गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरू एकदम समान देखिन्छन्।
CeraVe Moisturizing क्रीम
मॉइस्चराइजिंग क्रीमहरू छाला पनी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तपाईसँग तेल, सुक्खा, वा संयोजन छाला भए पनि। CeraVe Moisturizing क्रीम मद्दत गर्छ कि चीज छ। यो 12 औंस को बारे मा $ 15- $ 16 को लागी अनलाइन छ, र केहि साइटहरु नि: शुल्क शिपिंग र तत्काल कूपन प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाइँलाई तपाइँको खरीदमा पैसा बचत गर्न अनुमति दिनेछ।
क्रीमले hyaluronic एसिड प्रयोग गर्दछ। यसको प्रभावहरू दिनभरि चलिरहने प्रवृत्ति हुन्छ र लामो समयसम्म यो प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। साधारण मॉइस्चराइजिंग क्रीमहरू बारम्बार लागू गर्नुपर्दछ किनकि सामग्रीहरू फस्ट भित्र छोडिन्छ र छोटो समयमा अवशोषित हुन्छ।
तपाइँको छालाको लागि उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने तरिका, र तपाइँ प्राय जसो त्यसो गर्नुहुन्छ तपाइँका लक्षणहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ। तपाइँ सजिलैसँग उत्पादनहरू उपलब्ध हुने ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एपिसर्मिसलाई सेफगार्ड र पुनरुद्धार गर्न सम्भाव्य नमी उत्पादनहरू सम्भव हुन सक्छ।
उत्पादनहरूमा, यो हुमेक्टन्टको रूपमा कार्य गर्दछ। वास्तविकतामा, केहि उत्पादनहरूले व्यक्तिहरूको समूहको लागि काम प्राप्त गर्न सक्दछन् जबकि अरूहरूको लागि उनीहरूले कुनै उल्लेखनीय परिणामहरू प्रस्ताव नगर्न सक्छन्। जे होस्, स्किनकेयर उत्पादनहरू राम्रो कारणका लागि अनिवार्य भयो।
एल्टामड यूभी क्लियर ब्रॉड - स्पेक्ट्रम एसपीएफ एक्सएनयूएमएक्स
एसपीएफको सर्तमा तपाईंले दैनिक लगाउनु पर्छ, यो तपाईंको भौगोलिक क्षेत्रमा निर्भर छ। यसका साथै, यसको 50 को SPF ले तपाईंको छालालाई अत्यधिक तातोबाट बचाउँछ जुन सूर्यको किरणबाट आउँछ। छाला सुरक्षा कारकको साथ सनस्क्रीनहरू जसलाई 15 को एसपीएफ पनि भनिन्छ वा उच्च डोस्टले सूर्यको हानिकारक किरणहरूको बिरूद्ध तपाईंको छालाको रक्षा गर्ने आदर्श काम गर्दछ।
यदि तपाईं सनस्क्रीनबाट टाढा रहनुहुन्छ किनकि यसले तपाईंलाई ब्रेक आउट गर्दछ, एक सूर्य संरक्षकको खोजी गर्नुहोस् जुन एक्ने-प्रवण छालाका प्रकारहरूका लागि भयानक छ। धेरै जसो सनस्क्रीनहरू अनुहारको प्रयोगको लागि सुझाव दिएका छैनन् र यसले तपाईंलाई ब्रेक आउट गराउनेछ। घटनामा तपाईं एक व्यावहारिक सनस्क्रीन खोज्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको छालालाई उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ, त्यसपछि एल्टामड यूभी क्लियर ब्रॉड तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
यसको सुविधाहरूको साथ, वस्तु संवेदनशील एक्ने छालाको स्थिति भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ। तुरुन्तै क्लियर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ एक्सएनयूएमएक्स लागू गरेपछि तपाई स्थितिमा हुनुहुनेछ कि त्यो वस्तु प्रकाश छ र कुनै पछाडि बाँकी छैन।
पहिले, तपाइँले कुन प्रकारका उत्पादनहरू किन्नुपर्दछ भनेर जान्नुपर्दछ। आईटमले तपाईको छालालाई यूवीबी रेडिएसनबाट मात्र सुरक्षित राख्छ जुन घामको किरणमा समाप्त हुन्छ, तर थप रूपमा यसले तपाईको छालालाई युवीए रेबाट रक्षा गर्दछ जसले बुढेसकालको प्रभावलाई निम्त्याउँछ। यो कत्ति उज्यालोको कारण छालामा भिजाउनको लागि सक्षम भएको रिपोर्ट गरिएको छ। प्रिस्क्रिप्शन छाला हेरचाह उत्पादनहरु जो कोही आफ्नो छाला को प्रबंधन गर्न को लागी उपयुक्त छ।
एन्टिफंगल चाय रूखको तेल शरीर धुने
चिया रूखको तेल प्रयोग गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्। यसको कुनै खास ल्याक्टेसन-सम्बन्धित प्रयोगहरू छैनन्। यो संभवतः toenail फg्गस को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी प्राकृतिक घर उपचार हो। यो अमेजनमा फेला पार्न सजिलो छ र यो प्राय: उच्च गुणवत्ताको हुन्छ। सामयिक चिया रूखको तेल सामान्यतया राम्रोसँग सहन गरिन्छ, तर मौखिक रूपमा लिनु हुँदैन।
शरीर धुलाई को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो अत्यंत कोमल छ कि तथ्य छ र यस्तै अनुहार मा रोजगार गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक शरीर धुने धेरै स्किन को लागी आश्चर्यजनक हो र सामान्यतया बोल्ने गैर प्राकृतिक उत्पादनहरु भन्दा धेरै राम्रो छ। एन्टिफंगल शरीर धुनुले तपाईंको सम्पूर्ण शरीर, खुट्टा र औंलाहरू पूर्ण रूपले स्वस्थ राख्नको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सहज साधन प्रदान गर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो प्रभावहरू फेला पार्न, यो न the तल तल सबमिट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो मामला हो भने, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न किनकि हरियो न nailsहरू तपाईंको विश्वास भन्दा केहि बढी सामान्य हुन्छन्। यदि तपाईंले हरियो नेलको बारेमा कहिल्यै सुन्नु भएको छैन वा यसलाई कसरी पढ्ने फिक्स गर्ने भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईंले कहिल्यै हरियो न ofहरूको बारेमा सुन्नु भएको छैन, वा यसलाई पढ्न कसरी ठीक गर्ने भन्ने बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ। एन्टिफंगल चिया रूखको तेल मृत नेल हटाउने सम्भाव्य छैन, चिकित्सा सिरिन्जहरू संक्रमणमा ठीक समाधानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बर्टको माहुरीका उत्पादनहरू
उत्पादहरूको असाधारण समीक्षा हुन्छ किनकि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई वास्तविक फाइदाहरू प्रदान गर्छन्। बहुमतले महसुस गर्नेछन् कि उपचारहरू धेरै धेरै प्रभावकारी छन्। बर्टको माहुरी उत्पादनहरू अहिले अमेरिकाभर व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्, जहाँ तिनीहरू एक उद्योग नेतृत्व स्थिति पकडछन्, साथै ग्रहको वरिपरि बीस बजारहरूमा।
तपाईंले आफ्नो छालाको पिलि understand बुझ्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि समय जारी रहन्छ, त्यसपछि एकचोटि तपाईं नुहाइसकेपछि यो मुक्त हुन्छ। केवल थोरै मात्र तपाईको छाला हाइड्रेटेड रहन सुनिश्चित गर्न आदर्श हो। छाला मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो अ organ्ग हो। तपाईंको आँखा वरपरको छाला पूर्ण रूपमा सुक्खा हुन सक्छ र एक उत्कृष्ट मॉइश्चराइजर यसलाई पोषित र moisturized राख्न महत्वपूर्ण छ। यो धेरै कोमल छ र यसैले सावधानीपूर्वक चलाउनु पर्छ।
तपाईका आँखाहरूमा तेल छिर्न नदिन तपाई अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ। तपाईको आँखा वरपरको तेलको एक विशाल परिमाण भन्दा यो कम से कम प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। पश्चिमी मान्यताहरूको विपरित उपयुक्त तेलले छिद्रहरू रोक्दैन, र छालामा चिम्चिलो नदेखी सुन्दर चमक आउँछ।
सबै सामग्रीहरू हाम्रो साइटहरूमा हाम्रो साइटका साथै हाम्रो उत्पादनहरूमा उपलब्ध छन्। तिनीहरू दिनभर बिस्तारै रिलीज हुन्छन्। तपाईंले सुरु गर्नु अघि, सुनिश्चित गर्नुहोस् तपाईंले हातमा निर्देशनहरू पाउनु भएको छ।
केमिकल आधारित उत्पादनहरु केहि मानिसहरु लाई ईर्ष्यात्मक लाग्न सक्छ। धेरै उत्पादनहरूमा अन्तमा ठोस छाला हेरचाह प्रमाणपत्रहरू हुन्छन् र अधिक सावधान किनमेल उचित छ। अर्गानिक सौन्दर्य उत्पादनहरू आज धेरै सामान्य प्राप्त गर्दैछन्।
न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल
लगातार प्रयोगको साथ, तपाइँको छाला यति कोमल र मोटो महसुस गर्न लाग्नेछ कि तपाइँ एक पटक र सबैको लागि सुक्खा, फ्लाकी छालालाई विदाई दिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो छाला सुन्दर, चिल्लो र स्फूर्ति दिनुहुन्छ भने, न्युट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल किन्नुहोस्। यो छालाको सम्बन्ध बिना छाला को लागी को लागी एक किसिमको छाला को प्रकार को छ को एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। मेरो छाला विशेष रूपले संवेदनशील छैन र म सामान्यतया कुनै प्रकारको कुनै चीज बिना सबै प्रकारका उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछु। तपाइँको छाला दिन को समयमा हाइड्रेटेड, कुरकुरा भावना राख्न जारी रहनेछ। छाला मानव शरीरको एक हिस्सा हो र शरीरलाई हाइड्रेसनको आवश्यकता छ त्यस्तै एपिडर्मिस गर्दछ। हाम्रो लामो-अवधि पाठकहरु को लागी तपाईलाई थाहा हुन सक्छ कि मसँग एकदमै सुक्खा छाला छ।
अधिक के हो, यो एक औषधि पसल उत्पादन हो। उत्पादनमा त्यस्तो सामग्री समावेश हुँदैन जुन गर्भवती महिलाहरूको लागि सामान्य रूपमा खतरनाकको रूपमा चिन्ह लगाईन्छ। इमानदारीपूर्वक, सबैजनाले उहि समान उत्पादनहरू मनपर्दैन। उत्पादनहरू जुन हामी वर्षको बाँकीमा प्रयोग गर्दछौं प्राय जसो क्रूर चिसोको नराम्रो प्रभावहरूसँग लड्न पर्याप्त हुँदैन, जुन यसलाई छाला-हेरचाह गर्ने प्रणालीहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक बनाउँदछ।
भिज्नपनलाई ठीक गर्नाले तपाईंलाई दिनको लम्बाइका लागि क्रीम पुन: लागू गर्नुपर्दैनबाट टाढा राख्न तपाईंलाई धक्का दिन्छ। क्रीमले छालामा पानी बाँध्छ ताकि दिनभर कुनै ओसिलोपन गुमाउँदैन। न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल जेल र हाइड्रेट गर्ने क्षमताको लागि प्रसिद्ध छ र तपाईंको छालाको हेराइ तीन दिन भन्दा बढि बढाउनुहोस्।
भानिक्रीम मोइश्चराइजिंग स्किन क्रीम
त्यहाँ बजार मा छाला हेरचाह उत्पादनहरु को धेरै प्रकारहरु उपलब्ध छन्, केहि आधारभूत क्रीम छन् र अरूलाई विशेष Moisturizing छाला को उपयोग को लागी बनाईएको हो। बजारमा क्रिमका विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन तपाईं लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाइँ विचार गर्न चाहानुहुन्छ जब त्यहाँ बाहिर बिभिन्न उत्पादनहरु लाई अनुसन्धान गर्दै। भानिकामसँग कुनै कृत्रिम सुगन्ध र साबुन छैन त्यसैले यो एपिडर्मिसमा कोमल छ।
यदि छाला कुनै सम्बन्धमा फुलेको छ भने, निकाल्नेहरूलाई न्यूनतममा राख्नु पर्छ यदि तिनीहरू कुनै पनि तरिकामा समाप्त भए। मेरो छालालाई सामान्यतया बाहिरी सहयोगको ठूलो सम्झौता चाहिन्छ। जोसँग अत्यधिक संवेदनशील छाला छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो स्किनकेयर प्रोफेशनललाई प्रयोग गर्नु अघि सोध्नुहोस्।
त्यहाँ सफा गर्ने विभिन्न प्रकारका छन् किनकि तपाईं माथिको सूचीबाट देख्न सक्नुहुन्छ। जे होस् उत्पादन मॉइस्चराइजिंग छ, तपाईं अझै पनी पछि सामान्य क्रीम लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले छनौट गर्नुभएको क्रीमले सम्पूर्ण स्वास्थ्य र तपाईंको छालाको बाहिरी असरमा प्रभाव पार्छ, त्यसैले तपाईंको छाला हेरचाहको व्यवस्थामा प्रयोग गर्नको लागि के छनौट गर्नु यो महत्त्वपूर्ण छ।
CeraVe हाइड्रेटिंग क्लीन्जर
क्लीन्जरले वास्तवमा स्वास्थ्य र तपाईंको छालाको हेराईमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, दुबै र तुरुन्तै। तपाई उत्तम सफा गर्न सक्नुहुन्छ। क्रीमयुक्त, दुध सफा गर्नेहरू कसरी सिर्जना गर्ने तपाइँको लागि वास्तवमा, दैनिक क्लीन्जर पानी बिना वा बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। हल्का सुगन्धित क्लीन्जर दैनिक, दैनिक, र दुई पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ, र समय संग उत्कृष्ट परिणाम प्रस्तुत गर्न जारी हुनेछ। सेरावे हाइड्रेटिंग क्लीन्जरले गैर इरिट्रेटि ingredients सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ जुन तपाइँलाई राम्रो पौष्टिक छालाको ओसिलो सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए, यो तपाईको सबै कुरामा निर्भर छ कि तपाईले छनौट गर्नु भएको हो, किनकी अन्ततः तपाईलाई तपाईको छालाको प्रकार र यसले तपाईका लागि कसरी काम गर्ने तरीका थाहा छ। यदि छाला संवेदनशील छ भने, तपाइँ अनुहार क्लीन्सर छनौट गर्दा विशेष गरी सावधान हुनुपर्छ। तीय तेल को लागी कि तपाईंलाई यसको आवश्यक पर्दैन। राम्रो छ यदि तपाइँ सुक्खा छाला पाउनु भयो। यदि तपाईंसँग अत्यधिक सुक्खा वा खुजलीयुक्त छाला छ भने, सेराभ हाइड्रेटिंग क्लीन्सर प्रयोग गर्दा अर्को जलनको सम्भावित जोखिम हुने छैन।
मेडर्मा उन्नत स्कार जेल
जेल सस्तो र सजिलैसँग प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै पनि अन्य उपचार जस्तै धेरै, Mederma उन्नत स्कार जेल एक जादुई छडी छैन कि केहि घण्टा मा निशान निर्मूल हुनेछ। यो अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ यदि एलानटोनको कम प्रतिशतलाई ध्यानमा राख्दै खुराक अधिक थियो।
यसबाहेक, दाग पूर्ण रूपमा हराउने कुनै विश्वसनीय तरीका छैन। भाग्यवस, दागहरू मेटाउन को लागी धेरै राम्रा रणनीतिहरु छन्। अनिवार्य रूपमा, दागको मतलब निको हुन आएको छ। यदि तपाईं अनुहारमा अनुहारको दाग छ कि तपाईं गायब गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईं सम्भवतः मेडेर्मा को बारे मा उत्सुक हुन सक्छ।
कोही भन्छन् कि दागहरू शक्तिको स .्केत हुन्। चोटहरू जब त्यहाँ हुन्छ। धेरै व्यक्तिको लागि, तिनीहरू केवल पीडादायी हुन सक्दैनन्, तर नराम्रोसँग पनि, अक्सर भावनात्मक दु: ख निम्त्याउँदछन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू दृश्य स्थानमा छन्। यो नबिर्सनुहोस् कुनै उपचारको ग्यारेन्टी छैन र दाग पूर्ण रूपमा हराउने कुनै प्रमाणित विधि छैन। व्यक्तिहरू आज दागहरू बुढेसकालको स as्केतको रूपमा लिन्छन् र तिनीहरूलाई समाप्त गर्न केहि गर्न सक्छन्। त्यसोभए तपाईंसँग जिद्दी निशानहरू छन् जुन हटाउन कडा मिल्छ, आज हाम्रो सबैभन्दा राम्रो दाग हटाउने क्रीमहरू मध्ये एउटामा तान्न नडराउनुहोस्।
नबिर्सनुहोस्, लोशन लगाए पछि पनि तपाईसँग त्यस्तो प्रकारको शरीर हुनसक्दछ जुन चासो नहोस्। यो सजिलै एपिडर्मिसमा समाहित हुन्छ। यो संवेदनशील छालाका लागि उपयुक्त छ। यदि तपाईंले संवेदनशील छाला पाउनुभयो भने, Aveeno दैनिक मॉइस्चराइजिंग लोशन तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। तपाईंसँग तत्काल नरम र चिल्लो छाला हुनेछ। आफ्नो छाला राम्रो हेर्नुहोस् र तपाईं महान महसुस गर्न लाग्नु भएको छ।
सुगन्ध मजबूत छ, तर गन्ध धेरै लामो क्षणको लागि सहन हुँदैन। शुद्ध जेली लागू गर्ने त्रुटि नगर्नुहोस् एक पटक तपाईले वास्तवमै लोशन लागू गर्नुपर्दछ, वा तपाइँ परिणामको साथ तल झर्नुहुनेछ। त्यसैले त्यहाँ तपाईले बुझ्नुभयो, त्यहाँ धेरै उत्तम लोशनहरू छन्! यसको उच्च सहिष्णुताका कारण धेरै अलग मॉइश्चराइजरहरू भित्र आउन यो सम्भव छ। Aveeno सामान बाहेक, ब्यूटी समीक्षामा लोशन र मोइस्चराइजरहरूको ठूलो विविधता फेला पार्न पनि सम्भव छ।
यदि तपाईं यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुभयो भने तपाईंको छाला निश्चित रूपले धन्यवाद दिन्छ। सबैमा, यो वस्तुको महत्त्वपूर्ण खरीद हो। तपाईको शरीरलाई नमी गर्न तपाईलाई यस उत्पादको न्यूनतम मात्रा चाहिन्छ।
Instan Natural भिटामिन सी सीरम
तपाईको सीरमलाई विश्रामगृहमा राख्न यत्ति चाँडो नै यो लोभ्याउने छ, यो भण्डारणको लागि सबैभन्दा खराब स्थानहरू मध्ये एक हो किनकि आर्द्र ठाउँहरूले यसको गुणस्तरमा असर गर्न सक्छ। एन्टिआक्सीडन्टहरूले भरिएको, इन्स्टान्याक्टिकल भिटामिन सी सीरमलाई बजारमा सबैभन्दा प्रभावकारी एन्टिगेन्ट सीरम भनिन्छ।
भिटामिन सी सीरमले जलेको र खुजलीबाट थोरै राहत प्रदान गर्न सक्छ र यसले बाहिरी छालामा रातो रातो देखिनलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। InstaN Natural भिटामिन सी सीरम सामग्रीहरूको धेरै लामो सूची समावेश गर्दछ जुन उनीहरूको साइटमा प्रदान गरिएको छ।
भिटामिन सी प्राकृतिक फलहरु जस्तै फल र तरकारीबाट आउँदछ। यसले UV क्षतिको विरूद्ध संरक्षणको निश्चित मात्रा प्रदान गर्दछ। एक शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्ट भएकोले, यसले झुर्रीहरू र छालाको विकृतिबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ। यो एक शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्ट हो र छालालाई मर्मत गर्दछ साथै थप क्षति बिरूद्ध यसको रक्षा गर्दछ। InstaN Natural भिटामिन सी सीरम सुरक्षित र शक्तिशाली हुन प्रदर्शन गरिएको थियो र यसको दैनिक प्रयोगको लागि सल्लाह दिइयो। सीरम सबै प्रकारका खालका लागि सुविधाजनक छ।
भिटामिन सी शरीर भित्र कोलेजेन को सिर्जना गर्न को लागी आवश्यक छ, यो समझदार देखिन्छ यो रोक्न र बुढेसकाल को लक्षण को उल्ट्याउन मद्दत गर्दछ। यसले कोलेजेन निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, जसले कडा छालामा डोर्‍याउँछ, र ठीक लाइनहरूको उपस्थिति कम गर्दछ। सारांशमा भन्नुपर्दा, यो सीरमलाई सफा, सुक्खा छालामा राख्नुपर्दछ र यसलाई लगातार प्रयोग गर्नको लागि राख्नु हुन्छ। यो छालामा जादू काम गर्न भनिन्छ।